စားသောက်ဖွယ်စာရင်းများ ပြင်ဆင်ရာမှာ စားဖိုမှူးများ သတိပြုဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်အလက်များ | Food Magazine Myanmar
စားသောက်ဖွယ်စာရင်းများ ပြင်ဆင်ရာမှာ စားဖိုမှူးများ သတိပြုဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်အလက်များ
by Chef Sunny for Food Magazine
မြန်မာစားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့အသုံးချပညာရပ်များကို “Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ့ “Chefs Education Page’’ မှာ လစဉ်ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လမှာတော့ စားဖိုမှူးများအတွက် အထူးအရေးကြီးပြီး သေချာစွာသိရှိထားရမယ့် “စားသောက်ဖွယ်စာရင်းပြင်ဆင်ခြင်း” (Menu Planning) နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာများအား ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များမှာ “စားသောက်ဖွယ်စာရင်း” (Menu) က မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ စားသောက်ဖွယ်မျိုးစုံကို စနစ်တကျအစီအစဉ်ကျနစွာ ဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်သလို အစားအစာများရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ကျသင့်ငွေဈေးနှုန်းများကိုပါ ဖော်ပြပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စားသောက်ဖွယ်စာရင်း (Menu) များကို ပြင်ဆင်ရာမှာ စားဖိုမှူးများ အထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်အလက်များကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၂) စားသောက်ဖွယ်စာရင်းအား ဖော်ပြပုံ အစီအစဉ် (Menu Sequence)
စားသောက်ဖွယ်စာရင်းကို ဖော်ပြပုံမှာလည်း မှန်ကန်သော အစီအစဉ်တကျ ဖော်ပြပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Course by Course လို့ခေါ်တဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း စားသောက်တဲ့ပုံစံကို အခြေခံပြီး ‘‘Menu’’ ကိုလည်း ဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် “Three Course Menu’’ (သုံးမျိုးပါ စားသောက်ဖွယ်စာရင်း)၊ “Five Course Menu’’ (ငါးမျိုးပါ စားသောက်ဖွယ်စာရင်း ) မှသည် “Full Course Menu’’ (အပြည့်စုံဆုံး စားသောက်ဖွယ်စာရင်း) များအထိ် ရှိကြပါတယ်။ စားသောက်ဖွယ်စာရင်း နမူနာပုံစံများကို ဥပမာအနေဖြင့် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
“Three Course Menu’’ (၃ မျိုးပါ စားသောက်ဖွယ်စာရင်း)
Soup or Salad (First Course) ဟင်းချို (သို့ ) အသုပ် (ပထမစားဖွယ်)
Cream on Carrot Soup (or) Garden Salad with Vinaigrette Dressing.
[မုန်လာဥနီ ဟင်းချို (သို့) သီးရွက်စုံသုပ်နှင့် ရှလကာချဉ်]
Main Course (Second Course) အဓိကစားဖွယ် (ဒုတိယ စားဖွယ်)
Mango Chicken Serve with Mashed Potato & Mixed Vegetables
(ကြက်သား ၊ အာလူးထောင်း ၊ သီးရွက်စုံနှင့် သရက်သီးမှည့်ဆော့စ်) သို့မဟုတ်
Lemon Butter Sea Bass Serve with Mashed Potato & Steamed Vegetables
(သံပရို ထောပတ် ကကတစ်ငါးနှင့် အာလူးထောင်း၊ သီးရွက်စုံ)
Dessert (Third Course) အချိုပွဲ (တတိယစားဖွယ်)
Bread & Butter Pudding (ပေါင်မုန့်နှင့် ထောပတ်ပူတင်း) သို့မဟုတ်
Seasonal Fresh Fruits (သီးနှံစုံ)
“Five Course Menu’’ (၅ မျိုးပါ စားသောက်ဖွယ် စာရင်း)
Appetizer (First Course) ခံတွင်းဖွင့်အစားအစာ (ပထမ စားဖွယ်)
Chicken Skewer Serve with BBQ Sauce.
(ကြက်သားနှင့် သီးရွက်စုံကင် ဘာဘီကျူဆော့စ်)
Soup (Second Course) ဟင်းချို (ဒုတိယ စားဖွယ်)
Cream on Pumpkin Soup Serve with Garlic Croutons
Salad (Third Course) အသုပ် ( တတိယ စားဖွယ် )
Greek Salad Serve with Pesto Bread
(ဂရိသီးရွက်စုံသုပ်နှင့် ပင်စိမ်းပေါင်မုန့်ကင် )
Main Course (Fourth Course) အဓိကစားဖွယ် (စတုတ္ထစားဖွယ်)
Pan-Grill Salmon Fillet Serve with Asparagus & New Potato in White Wine Sauce.
(ဆော်လမွန်ငါး အသားလွှာကင်၊ ရေကညွတ်၊ အာလူးပေါင်းနှင့် ဝိုင်ဖြူဆော့စ်) သို့မဟုတ်
Pan-Grill Sirloin Steak Serve with Roasted Potato, Green Vegetables & Black Pepper Sauce.
(အမဲ လိုင်းသားကင်၊ အာလူးပေါင်း၊ အစိမ်းရောင်အရွက်စုံနှင့် ငရုတ်ကောင်းဆော့စ် )
Dessert (Fifth Course) အချိုပွဲ (ပဉ္စမစားဖွယ် )
Panna Cotta Serve with Vanilla Sauce.
(နို့မလိုင်ပူတင်းနှင့် ဗနီလာဆော့စ်) သို့မဟုတ်
Lemon Sorbet on Fruit Salad.
စားသောက်ဖွယ်စာရင်း ပြင်ဆင်ရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်များထဲမှ (၂) စားသောက်ဖွယ်စာရင်းကို ဖော်ပြပုံ အစီအစဉ် (Menu Sequence) နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စားသောက်ဖွယ်စာရင်းအား ဖော်ပြပုံ အစီအစဉ် (Menu Sequence) နှင့် ပတ်သက်၍ “Full Course Menu’’ (အပြည့်စုံဆုံး စားသောက်ဖွယ်စာရင်း) နှင့် (၃) ပြီးပြည့်စုံသော စားသောက်ဖွယ် စာရင်းအခြေခံအချက်များ (CompileaBasic Menu) ကို လာမယ့်လမှာ ဖော်ပြပေးမယ့် “Myanmar Chefs Development Centre’’ MCDC, Yangon ရဲ့ “Chef Education Page’’ မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ ဆက်လက်အားပေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
‘‘Welcome to MCDC, Yangon”, “BeaChef by Yourself’’ See you next month.
Myanmar Chefs Development Centre, Yangon. (M.C.D.C, Ygn:)
Italian Food Experience 9th Edition ဖွင့်ပွဲအ�..
Food & Hotel Myanmar (FMHH) ၂၀၁၉ ဆဋ္ဌမအကြ..